‘सरकारका विरुद्ध माधव नेपाल बोलिसके, हाम्रा साथी एक शब्द बोल्दैनन्’ – Waikhari
गृहपृष्ठ पत्रपत्रिका बाट ‘सरकारका विरुद्ध माधव नेपाल बोलिसके, हाम्रा साथी एक शब्द बोल्दैनन्’
भैरहवा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली सरकारले विधिको शासन नमानेको आरोप लगाएका छन्। ओली सरकार बिरुद्ध अन्तिम लडाइ लडनु पर्ने बेला आएको उनको भनाई छ। ओली सरकार दुनीयाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी र स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख गर्दै देउवाले सरकारको अधिनायकवाद बिरुद्ध कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।
राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा सुझाव संकलनकालागि प्रदेश पाँचको भैरहवामा गरिएको कार्यशाला गोष्ठीलाइ सम्बोधन गर्दै बिहीबार सभापति देउवाले अधिनायकवादी सरकारबाट प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइ नै खतरा रहेको दावी गरकाे समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
कम्युनिष्ट अधिनायकवाद बिरुद्ध लडन कांग्रेस बलियो हुनुपर्ने भन्दै देउवाले अन्तरघातको पुरानो रोगबाट मुक्त भर्इ सरकारको सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारी कदम बिरुद्ध लड्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘हत्या हिंसा, बलत्कारका घटना बढीरहेका छन्। महंगीले जनता आक्रान्त छन्। जनताले सुरक्षाको अनुभुती गर्न पाएका छैनन। यस्तो पनि बहुमतको शक्तिशाली सरकार हुन्छ’देउवाले भने।
यो पनि पढ्नुहोस् ‘देउवा असफल भए, अब नेतृत्वको लागि नयाँ मोर्चा बनाउँछौं’ : सुजाता कोइराला
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यशैली तत्काल नसच्याए पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने पनि दाबी गरउकी छन् ।बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेतृ कोइरालाले भनिन्,‘शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो कार्यशैली बदल्न सक्नुहुन्छ भने बललिँदै राम्रो हुन्छ । नत्र त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याईरहेको छ । यो कुरा सत्य नै हो । पार्टीमा गुटबन्दी बढ्दै गैराखेको छ । हामीले कसलाई दोष दिने ? पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने जिम्मेवारी देउवाजीले लिनुपर्छ ।’
उनले भनिन्,‘सभापति बन्नको लागि अब सबैजनाको तयारी त भैरहेको छ नि । अरुपनि छन् । देउवामात्रै हुनुहुन्न यो पार्टीमा, धेरैजना हुनुहुन्छ । धेरै जनाको ईच्छा छ सभापति बन्ने । त्यही बेलामा हामी छलफल गर्छौं । को उपयुक्त हुन्छ र को सबैभन्दा बलियो हुन्छ ? उही सभापति बन्छ । अहिले देउवाजीलाई हराउने वा पछार्ने कुरा नगरौं । त्यो त्यही बेलाको कुरा हो । अहिले पार्टी बनाउने कुरा गरौं ।’
आफूहरुको चिन्ता भनेको नै संगठनलाई बलियो बनाउने भएकोले को सभापति बन्छ ? या बन्दैन भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा भएको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले भनिन्,‘समय आएपछि सबैजना बसिकन् सल्लाह गरेरमात्रै को सभापति बन्छ ? त्यो कुरा हुन्छ । तर, अहिले भने हामीहरु तीन जना एकजुट भईकन अगाडि बढेका छौं । र, हामीहरु तीन जनाले अब जिल्लाऔजिल्ला घुम्नुपर्ने पनि आवश्यकता मैले देखें । मोरङमा पनि उत्साह देखियो । जिपी कोइराला फाउण्डेशनको कार्यक्रममा पूर्वाञ्चलका सबै साथीहरु आउनुभयो । ठूलो उर्जा देखियो, अब यसलाई ढिला नगरी विस्तार गर्छौं ।’
उनले अहिलेपनि कांग्रेसका कोही पनि नेता तथा कार्यकर्ता निराशा बन्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरिन् । उनले भने,‘कांग्रेस अहिलेपनि बलियो छ । पहिलापनि धेरै चोटी नेपाली कांग्रेस सिद्दियो-सिद्दियो भन्ने हल्ला हुन्थ्यो । तर, फेरी कांग्रेस चुनाव जितेर आउँथ्यो । यस्तोपनि हामीले देखेका छौं । यो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपाली जनताले प्रजातन्त्र चाहेका छन् । जनताले प्रजातन्त्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । जनताको आवश्यकत्ता र भावनाअनुसार नै कांग्रेसले आन्दोलन गरेको ईतिहाँस छ ।’
कांग्रेसको नेतृत्वमा कोइराला परिवारबाट शशांक कि शेखर भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्,‘त्यो अहिले म भन्न सक्दिन् । के हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा अहिले कसरी भन्ने ? यो त पछिको कुरा हो । अरु साथीहरुपनि हुनुहुन्छ । अहिले समय आएको छैन् । समय आएपछि उहाँहरु बस्नुहुन्छ । सल्लाह गर्नुहुन्छ । अहिले त संगठन गर्ने बेला हो । त्यसको लागि हामी अघि बढ्छौं ।’
उनले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गरीन्। उनले भनिन्,‘मलाई त आश्चर्य लागेको छ, यत्रो दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, विकास होला भन्ने लागेको थियो । तर, सरकार यो ९ महिनामा पूर्ण रुपमा ‘फेलियर’ भयो । मुलुकमा स्थिरताको साटो अस्थिरता देखियो । विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेनन् । कर बढाएर जनतालाई भार थप्ने काम गर्यो । जनतालाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याईएको छ।’
उनले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा एउटापनि काम गर्न नसकेको गम्भिर आरोप लगाईन् । उनले भने,‘म आँफै आश्चर्यमा परेकी छु, कि प्रजातन्त्रमा यत्रो दुई तिहाई बहुमत भनेको त एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि सफल भएन भने यो एकदम खतरनाक हुनसक्छ । र, उहाँहरुले किन सरकार चलाउन नसकेको हो ? अहिले देश यत्रो भ्रष्टाचारले भरिएको छ । यति भ्रष्टाचार, यति भ्रष्टाचार कि त्यसको कुनै सिमा नै छैन् । साँच्चि भनेको मैले त कल्पना पनि गरेको थिईंन कि नेपालमा यत्रो भ्रष्टाचार, यति फाष्ट भ्रष्टाचार महामारी फैलिएजस्तो फैलिएको छ । भ्रष्टाचार अहिले ग्रास रुटसम्म पुगिसक्यो । यो चाहीँ देशको लागि खतरनाक हो ।’
चीनपनि असल र राम्रो छिमेकी भएकोले उसँगपनि सहयोग लिन सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्,‘तर, हाम्रो डे–टु–डे बिजनेश छन्, खुल्ला बोर्डर भएकोले समस्याहरु पनि छन् । त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ । र, समाधान गर्ने क्षमतापनि राख्नुपर्छ । हाम्रो बीचमा आपसी विश्वास पनि हुनुपर्छ । र, सत्य पनि बोल्नुपर्छ । हामीले आफ्नो हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विशेषगरि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भारतसँग कुराकानी गर्नपनि सजिलो छ । र, झगडा गर्नपनि सजिलो छ।’सभार स्रोत -हाम्रा कुरा डट कम